Mucaad Yare, 3-jir Soomaali ah oo isku dayay inuu ka cararo argagixiye Tarranta (Xogta carruurta Soomaalida ah ee dhimatay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Mucaad Yare, 3-jir Soomaali ah oo isku dayay inuu ka cararo argagixiye...
Mucaad Yare, 3-jir Soomaali ah oo isku dayay inuu ka cararo argagixiye Tarranta (Xogta carruurta Soomaalida ah ee dhimatay)
(Christchurch) 16 Maarso 2019 – Waxaa shalay dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee lagu qaaday masjidyo ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka NZ ka mid ahaa carruur aad u yar yar oo uu ku jirey wiil yar oo Soomaaliyeed.
Abdulrahman Hashi, 60 jir, waacid ka ah masjidka Dar Al Hijrah Mosque ee magaalada Minneapolis, ayaa The Washington Post u sheegay in wiil yar oo oo uu abti u yahay oo 4-jir ihi uu ka mid ahaa dadkii lagu xasuuqay masjidyadii la weeraray.
Wuxuu sheegay inuu soo wacay seeddigii Adan Ibrahin Dirie, oo laftiisa lagu dhaawacay weerarka wiilkiisa yar lagu diley, wuxuuna ku war geliyay in 4 ka mid ah carruurtiisu ay bad qabaan, balse uu dhintay wiilkii ugu yaraa ee Abdullahi.
Qoyska ayaa kasoo qaxay Somalia bartamihii 1990-kii, waxayna iyagoo qaxooti ah degeen dalka New Zealand.
Wiil kale oo isna Soomaali ah ayaa lagu diley weerarkaasi, waana Mucaad Ibraahim oo 3 jir ahaa, kaasoo markii hore la waayay balse kaddib maydkiisa laga dhex helay dadkii ku dhintay Masjid Al Noor.
Mucaad Yare ayaa la sheegay inuu cararay xilligii ay toogtu socotey, waxaana deeto cayrsadey ninkii weerarka bahalnimada ah soo qaaday kaddib rasaas ku furay wiilka yar oo masjidka la yimid aabihii iyo walaalkii ka wayn oo iyagu badbaadey.
‘Ilaah baan dhankiisa ka nimi, isaga ayaana u noqonaynaa,’ ayuu yiri Mr Ibrahim.
Previous articleXOG QOTO DHEER: Maxaa ku qornaa qoryihii uu watey ninkii masjidyada weeraray (Qaybtii 2-aad)
Next articleDAAWO: Wiil yar oo UKUN ku bajiyay madaxa siyaasi shalay ku jeesjeesay dadkii lagu laayay NZ + Sawirro